खाडी के हो | नेटवर्क मौसम विज्ञान
भूभागको भूगोल निर्माण हुँदैछ हाम्रो ग्रह मा लाखौं वर्ष। गल्तीहरू, भूकम्प, प्रगतिशील हावा इरोसन, कडा छालहरू, ड्र्याग, अवसादन, आदि द्वारा उत्पन्न। ती भूगर्भीय प्रक्रियाहरू हुन् जसले भौगोलिक रूपहरूलाई जन्म दिन्छ जुन हामी आज परिणामको रूपमा देख्छौं। खाडी, हिमाल र केप जस्तो आकार।
निस्सन्देह तपाईंले एउटा खाडी देख्नुभयो र यो कसरी गठन भयो भन्ने बारे तपाईंले सोच्नुभयो। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि गल्फ भनेको के हो र यसको गठन प्रक्रिया के हो?
2 बे र कोभ को परिभाषा
3 खाडी, खाडी र कोभ बीच भिन्नता
4 संसारमा सबैभन्दा राम्रो ज्ञात खाडीहरू
4.1 मेक्सिको को खाडी
4.2 अलास्काको खाडी
4.3 सेन्ट लॉरेन्सको खाडी
एउटा खाडी भौगोलिक विशेषता हो जसको विशेषताले हुन्छ समुद्र वा समुद्रको ठूलो हिस्सा भूमिमा ल्याइयो। यो दुई हेडल्यान्ड वा दुई प्रायद्वीप बीच स्थित छ। खाडी सामान्यतया एकदम गहिरो हुन्छ र तिनीहरू ठूलो आर्थिक महत्त्वको हुनाले उनीहरूको स्थान र भौगोलिक स्वभावका कारण धन्यवाद, तिनीहरूले समुद्री किनारलाई उच्च ज्वारबाट जोगाउँछन्। यसले समुद्रीतटको अर्थव्यवस्था बृद्धि गर्न पोर्ट र लेभिज निर्माणको पक्षमा छ।
शब्द खाडी प्राय जसो खाडी वा इनलेट्सको साथ भ्रमित हुन्छ, यद्यपि तिनीहरू समान हुँदैनन्।
बे र कोभ को परिभाषा
खाडी समुद्र वा एक तालको एक इनलेट हो जुन लगभग पूरै जग्गाले घेरिएको छ, खाडी जस्तो छैन, यसको एक अन्त बाहेक। खाडीहरू तटीय कटाईका कारण वर्षौंको दौडान बनेको छ र भौगोलिकहरूले यसलाई समुद्री तटको छेउछाउको रूपमा लिन्छ। पानी निरन्तर तटमा हिट गर्दैछ र यसले यस प्रकारको मोर्फोलजी सिर्जना गर्न वर्षौंको बखत आकार दिइरहेको छ।
तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि खाडी प्रायद्वीपको विपरित हो। जहाँ प्रायद्वीप पानीले घेरिएको जमिनको टुक्रा हो, एक छेउ बाहेक, खाडी जमिनले घेरिएको पानीको एक टुक्रा हो, एक छेउको बाहेक।
खाडीहरू जस्तै मानिस पनि खाडीको फाइदा लिन्छ, क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा वृद्धिका लागि पोर्ट निर्माणको लागि।
अर्कोतर्फ, भूगोलमा कोभलाई पानीको इनलेटले बनेको तटीय भौगोलिक विशेषताको रूपमा परिभाषित गरेको छ जुन गोलाकार आकार लिन्छ र साँघुरो मुखले सुरक्षित गर्दछ, सामान्यतया चट्टानले बनेको हुन्छ।
खाडी, खाडी र कोभ बीच भिन्नता
यी सर्तहरू सामान्य रूपमा भ्रमित भएकाले भूगोलले उनीहरू बीचको भिन्नता स्थापित गरेको छ। खाडी, एक बे, र एक इनलेट, समान आकृतिहरूको बावजुद, सीमा र गहिराईमा भिन्नता साझा। यस कारणका लागि, खाडी सबैभन्दा ठूलो आकार र गहिराईको साथ पहिलो हो, खाडीहरू पछि, सानो सानो र कम भइरहेको छ र inlet सँग अन्त हुन्छ।
इनलेट्स अन्तिम स्थानको लागि छोडिन्छ, यति सानो र यति उथलो भएकोलेसमुद्री किनारबाट परिमार्जन गर्नुको सट्टा तिनीहरू समुद्री समुद्री किनारबाट समुद्रमा फैलिने चट्टानहरू द्वारा परिमार्जन हुन्छन्।
के यी तीन भू-भौगोलिक शक्तिमा समानता छ कि तिनीहरू क्षेत्रको अर्थव्यवस्था सुधार गर्न पोर्ट निर्माणको लागि हुन्। बन्दरगाहहरू अधिक सजीलो निर्माण गर्न सकिन्छ, किनकि पानी कमजोर छ र यी संरचनाहरूले उनलाई ज्वारको ठाडो उदयबाट बचाउँछ।
थप रूपमा, सुन्दरता तिनीहरूले परिदृश्यहरूको लागि प्रदान, विश्व अर्थव्यवस्था को लागी महत्वपूर्ण बिन्दुहरु छन्, केवल बन्दरगाहको निर्माणका कारणले मात्र होईन, तर ती स्थानहरू हुनको लागि पनि निश्चित हुन्छन् जहाँ व्यापारीहरू ठूलो मात्रामा आदानप्रदान हुन्छन्, दुबै निश्चित देशबाट आइपुग्ने ठाउँहरू, र जसको छोडेर जान्छन्, तिनीहरू प्रायः पर्यटन स्थलहरू इत्यादिको खोजीमा पर्दछन्।
इनलेटहरू आकार र गहिराईमा सानो भएकोले पोर्ट निर्माणको लागि यत्तिको व्यापक रूपमा प्रयोग गरिदैन, यद्यपि कहिलेका साना कागजातहरू निर्माण गर्दछन्, तिनीहरू समुद्र तटको रूपमा प्रयोग गर्न बढी प्रयोग गरिन्छ, चट्टानहरूले पानी घेर्यो र यो तरंगहरू वा कडा प्रवाहहरूको लागि अनुमति दिँदैन भन्ने तथ्यलाई धन्यवाद।
संसारमा सबैभन्दा राम्रो ज्ञात खाडीहरू
एकचोटी तपाईले गल्फको परिभाषा र खाडी र इनलेटहरू बीचको फरक बुझिसक्नु भएपछि यो समय संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रख्यात खाडीहरू पत्ता लगाउने समय हो। यस ग्रहमा थुप्रै खाडीहरू छन्, तर ठूलो मात्रामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको मेक्सिकोको खाडी, अलास्काको खाडी र सेन्ट लरेन्सको खाडी हो।
मेक्सिको को खाडी
मेक्सिकोको खाडी मेक्सिकोको समुद्री तट (तामाउलीपास, भेराक्रुज, तबस्को, क्याम्पेच र युकाटिन राज्यहरूमा) अवस्थित छ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको (फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुइसियाना र टेक्सास राज्यहरूमा) को तटहरू बीचमा अवस्थित छ। क्युबा टापुबाट (खाडीको पूर्वी भागमा अटलान्टिक महासागरमा यसको आउटलेटमा)।
अलास्काको खाडीमा अलास्काको दक्षिणी तटमा प्रशान्त महासागरको घुमाउरो विस्तार छ, पश्चिममा अलास्का प्रायद्वीप र कोडियाक टापुको सीमा छ र पूर्वमा ग्लेशियर खाडीमा अलेक्ज्याण्डर द्वीपसमूहले घेरिएको छ। अलास्काको खाडी यो गहिराई र सीमा मा यति ठूलो छ कि यो एक समुद्र मानिन्छ।
प्रशान्त उत्तरपश्चिममा वर्षा duringतुमा संकलन गरिएको वर्षाको विशाल बहुमत यस खाडीमा हुन्छ। तट एकदम नराम्रो छ र गहिरो प्रवेश द्वारहरू छन्। जो कोही यसलाई हेर्न जान सक्दछन्, तपाईं जsts्गल, पहाडहरू र किनार क्षेत्रबाट हिमनदीहरूको दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
खाडीमा बग्ने मुख्य धारा अलास्काको हो। यो एक प्रवाह हो जुन कन्वेयर बेल्टको अंश हो, यो चरित्रमा तातो छ र उत्तरमा बग्छ।
यसको गठन अवस्था र यसको भौगोलिक संरचनाको कारण, अलास्काको खाडीले निरन्तर आँधीबेहरी उत्पादन गर्दछ। यो घटना आर्कटिक सर्कलका क्षेत्रहरूमा आवृत्ति र तीव्रतामा बढेको छ जहाँ प्रशस्त हिउँ र बरफले आँधीबेहरी बगाएको छ। यी मध्ये धेरै तूफान दक्षिण वा ब्रिटिश कोलम्बिया, वाशिंगटन र ओरेगनको तटमा सर्छ।
सेन्ट लॉरेन्सको खाडी
यो खाडी पूर्वी क्यानाडामा अवस्थित छ र एट्लान्टिक महासागरसँग जोड्दछ। यो एक धेरै व्यापक खाडी हो। सेन्ट लरेन्स नदी ओन्टारियो तालबाट सुरू हुन्छ र विश्वको सब भन्दा ठूलो मुहान हुँदै यस खाडीमा खाली हुन्छ।
यस जानकारीको साथ तपाईले खाडीहरू, खाडी र इनलेट बीचको भिन्नता राम्ररी जान्न सक्नुहुनेछ र विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गल्फहरू पनि जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Divulgation » खाडी भनेको के हो?
.8,2.२ परिमाणको भूकम्पले अलास्कालाई हल्लायो, ​​सुनामी चेतावनी दिन्छ